Toy izao ny endrik'i Inkscape kinova 0.49 ao amin'ny GTK3 | Avy amin'ny Linux
Tahaka izany ny fijerin'i Inkscape kinova 0.49 ao amin'ny GTK3
Angamba tsy izaho no miresaka Inkscape amin'ny ambaratonga famolavolana satria, mbola tsy haiko ny mampiasa azy tsara, saingy tsy miafina amin'ny olona iza izany Inkscape tsy isalasalana fa fitaovana famolavolana vector tena tsara izay mifaninana sary, ary aza miteny amiko fa manitatra aho satria fantatro ireo matihanina amin'ny sehatra famolavolana samihafa izay mampiasa azy nefa tsy nitaraina.
Ny tena izy dia misy foana ny resaka GIMP, fitaovana izay nanangona vovoka be dia be tamin'izany fotoana izany ary nametrahana fanantenana lehibe ho an'ireo kinova ho avy, saingy ... Inkscape? Aiza? Eto ary, ary toy izao no endrik'ilay ho avy:
Marihina fa fomba fijery fampandrosoana ireo, mbola tsy misy ny kinova fitsapana ary hitanao ny mamoaka fanamarihana hahafantarana ny fandehanan'izy ireo amin'ny fampandrosoana na izay kasain'izy ireo hatao amin'ity kinova vaovao ity.
Tsy dia lava loatra ilay lahatsoratra, ny hany fanampiny azoko ampiana ho an'ireo izay maniry, dia ny rohy ampidirina lohahevitra kisary izay misy ny sary, ankoatr'izay dia mila miandry vaovao momba izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » Tahaka izany ny fijerin'i Inkscape kinova 0.49 ao amin'ny GTK3
Toa tsara ny marina ary mieritreritra aho fa safidy tsara ho an'ny famolavolana vector izany. Heveriko ihany koa fa hanosika ireo fampiharana hafa mbola novolavolaina tao amin'ny GTK2 ity hirosoana mankany GTK3. Tsy maintsy miandry ny fandrosoana bebe kokoa amin'ny fivoarany sy ny fizotrany debugging isika mba hahafahany manavao azy io ary hahita izay vaovao sy fanatsarana entiny.
Efa nanandrana azy aho taloha ary tsy tia zavatra roa.
- Tsy afaka manana pejy maromaro isaky ny antontan-taratasy ianao ka voatery mampiasa rakitra iray isaky ny pejy izay manana ny endrikay, izay manahirana azy.
- Tsy tantiny ny CMYK satria mifantoka amin'ny famolavolana vector natao ho an'ny pejin-tranonkala fa tsy amin'ny fanontana, mampalahelo.
Tsy haiko raha nisy niova ireo tamin'ny kinova vaovao satria tsy nampiasaiko intsony.
Raha marina ny anao, ny endrika Linux dia mifantoka amin'ny famolavolana nomerika, tsy azo lavina izy io.
Tena tsara ny fahamarinana. Tiako ny fijerin'ny interface, indrindra ny fikirakirana ny gris.
Manana Birao fanontam-pirinty aho izay iasako EXCLUSIVELY amin'ny Free Software ambanin'ny Linux.
Nahavita asa in-4 sarotra aho, ny sasany izay navoakako tao amin'ny vondrona Facebook «Free Graphic Design.UY».
Tsy "fantsika vaky" aho, ary tsy "lavo", ary TSY mila mampiasa rindrambaiko mihidy sy tsy miankina mihitsy aho.
Tsy milaza aho fa ny miasa miaraka amin'ny Free Software dia mora kokoa na tsara kokoa noho ny miasa amin'ny Closed and Private Software, dia miteny aho fa AZONAO koa ny miasa matihanina amin'ny pirinty amin'ny Free Software sy Linux.
Marina ny momba ny pejy marobe sy ny lohahevitra CMYK, saingy misy fomba fiasa miaraka amin'ny INKSCAPE ampiarahina amin'ny SCRIBUS izay mitantana tsara ny lohahevitra CMYK ary manafatra ny SVG (na dia misy ferana aza).
Zavatra iray izay mbola tsy nanandramako, fa mety mety, ny famoronana PDF avy amin'ny Inkscape fa tsy avy amin'ny sivana fanondranana anatiny na "save as"; avy amin'ny mpanonta POSTSCRIP virtoaly:
Marihina fa kely ny mpanontafako, fa ny asa rehetra azoko atao tsy misy olana amin'ny Free Software ambanin'ny Linux, indrindra:
KUBUNTU 64 soka
Layout sy Assembly, soraty ny PageMaker na InDesign
Sary Vector, Corel na Illustrator karazana
Fanovana sary bitmap, Photoshop-like
Ho an'ny fanovana ho CMYK an'ny sary RGB dia niasa niaraka tamin'ny GIMP, na dia tato ho ato aza dia avelako hanao SCRIBUS ny fiovam-po rehefa manondrana amin'ny CMYK PDF, miaraka amin'ny valiny tena mahafa-po.
Office Suite, miaraka amina programa DRAW, ho an'ny Vector Drawing, fototra nefa tena marobe, na dia omeko torohevitra SCRIBUS ho an'ny asa sarotra kokoa aza.
CALC amin'ny teti-bola.
Misy programa hafa momba ny Vector Drawing maimaim-poana izay tsy mbola nanandramako:
Tsara ny zavatra niainanao. Misaotra ny fizarana. Momba ny XaraLX (ny kinova ho an'ny Linux) Mihevitra aho fa najanona izany raha oharina amin'ny kinova ho an'ny Windows.
Mahagaga fotsiny, tsara raha tsara ny manoratra lahatsoratra momba azy eto amin'ny bilaogy momba ny zavatra niainanao.
Ho an'ny asako dia mila mpanodin-teny (Mpanoratra) sy fitaovana roa ho an'ny feo (Audacity sy Praat) fotsiny aho. Ny famakiana ny hevitrao dia nahafinaritra sy nahaliana tokoa: tsy ny matihanina rehetra amin'ny famolavolana sary sy ny toa azy no sahy mampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Enga anie ianao afaka manoratra lahatsoratra iray manontolo momba ny zavatra niainanao ary avelan'i Elav sy Gaara hamoaka izany eto amin'ny From Linux.
Noteren'izy ireo tany am-piasana aho hampiasa Corel X5 ary azoko lazaina amin'ny fomba feno fa tsy dia lavitra any aoriana i Inkscape. Milamina kokoa izy io (Androany vao nikatona teo alohan'ilay mpanjifa ny X5 !! miaraka amin'ny tsindry tsotra eo amin'ny faritra tsy misy pejy, amin'ny famolavolana feno dia manipy ahy daholo !!!) Ary koa, (na dia marina aza izany zavatra tsy ampy) dia manana fitaovana betsaka izay tsy ananan'i Corel (ary tsy fantatr'izy ireo ny fomba tsy hahitako azy). Rately loatra Corel mihidy ka tsy afaka hanafatra ny cdr soa aman-tsara, fa veloma mandresy !!!.
Fa ao an-trano no ampiasako azy, ary ny marina dia nieritreritra aho fa najanona ilay tetikasa.
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana OpenSurce tsara indrindra (miaraka amin'ireo nantsoin'i Daniel Bertúa)
Manantena aho fa tsy ho ela dia ao amin'ny repos izy ireo.
Misaotra nano nitondra vaovao tsara toy izany hatrany 🙂
Azonao atao ny manondrana amin'ny PDF avy any Corel ary atsangano amin'ny Inkscape.
Raha tadidiko tsara dia nanondrana an'i SVG koa i Corel (heveriko fa tsy azoko antoka).
Ao amin'ny orinasam-pirinty iray izay tsy maintsy nametraka ara-dalàna ny zava-drehetra dia mamindra ny zava-drehetra amin'ny Free Software (ambanin'ny Windows) izy ireo ary nanoro hevitra azy ireo aho, Inkscape, Scribus, GIMP, LibreOffice.org
Betsaka ny zavatra efa vitany tao amin'ny PageMaker ary ny fomba nahitanay nankany amin'ny Inkscape dia ny famoronana PDF sy fampakaràna azy ireo amin'ny Inkscape, tsy teny io fa mandeha.
Tena tiako ny SCRIBUS, mety ho tsy hita izy io raha nanisy sivana tsara na fanohanana amin'ny fampidirana tanteraka ny fisie SVG noforonina niaraka tamin'i Inkscape, ary maro amin'ireo programa Closed sy Privative no hangovitra amin'ity combo integrated ity.
Rehefa manana aloka, mangarahara, sns sns ny rakitra SVG. Sarotra ny Scribus ary mitondra ny fisaka rehetra, noho izany dia tsy maintsy manondrana toy ny PNG ianao avy ao Inkscape ary ento ho toy ny sary, izay mandeha, nefa tsy io no fomba tsara sy tsara indrindra.
Inkscape dia tsy hanana ny fanohanana fanondranana CMYK PDF, izay mitantana lahatsoratra tsara kokoa, ary araka ny nolazain'izy ireo tetsy ambony, pejy maro.
Tsy zakan'i Daniel ny mangataka anao hanatevin-daharana anay, manana mpanoratra iray ihany izahay manana ny tena fahalalana momba ny famolavolana ary zara raha ho eo amin'ny bilaogy izy noho ny antony manokana.
Heveriko fa mitovy, kely ny voalaza momba ny famolavolana amin'ny Linux.
Izaho koa te-hanoratra indray andro any, nefa indraindray tsy manam-potoana hanomezana hevitra 🙁
Ary hanandrana ny handeha amin'ny PDF aho hijery izay mitranga.
Ry olona, ​​tsy afaka manolo-tena amin'ny zavatra raikitra aho, fa te hiara-miasa arak'izay tratry ny heriko.
Tsy manam-pahaizana aho, mihevitra ny tenako ho mpianatra mandrakizay aho, mianatra avy amin'ny olon-drehetra isika rehetra, mpampiasa hafa mizara traikefa fotsiny aho.
Raha te-hamoaka zavatra nosoratako tao amin'ny bilaogiko ianao, dia manome alalana anao.
Jereo eto, nanoratra zavatra vitsivitsy aho:
Raha tianao dia afaka manangona karazana tatitra virtoaly izahay, amin'ny alàlan'ny chat na mailaka na izay tianao.
Taloha lasa izay aho dia nanao magazine nomerika antsoina hoe MiniMiniM, hitanao amin'ny Internet izany amin'ny:
Izany no zavatra niainako tamin'ny naha-mpanoratra an-tsoratra sy mpamorona magazine, ary tsy zavatra iray manintona ahy loatra ny hamerina azy io, manome asa betsaka, indrindra raha manome voninahitra sy noho ny fitiavana zavakanto izany.
Manoratra eo amin'ny manodidina aho (facebook, bilaogy, forum), fa amin'izay aho vao voakaikitry ny bibikely.
Raha tianao dia ampio aho amin'ny Facebook, na midira amin'ny Free Graphic Design Group. UY, asaina ara-dalàna ianao, tongasoa ny rehetra ary misy ny mpampiasa tsotra mizara traikefa, tsy misy lehilahy hendry.
Miarahaba ary mifandray izahay, manantena aho fa misy zavatra nosoratako hanampy anao.
Tsy azoko ilay vondrona, raha azonao omena URL aho dia faly aho.
Ny vondrona Facebook an'ny Free Graphic Design.UY dia ao:
Damien Muraña dia hoy izy:
Vaovao mahafinaritra! Manantena aho fa ho avy ny kinova vaovao feno fanatsarana.
Izaho manokana dia tsy nampiasa Inkscape nandritra ny fotoana fohy satria tsy nilaiko akory, fa mba hamoronana sary vongana ho an'ny tranonkala ary zavatra hafa dia tsara foana izany.
Inkscape dia fitaovana tsara ho an'ny fametrahana tranonkala sy maro hafa.
Valiny tamin'i Damián Muraña
Izy io dia programa tsara.
Pepe Mauro dia hoy izy:
Salama daholo! Vaovao amin'ny bilaogy aho ary te-handray an'ity lohahevitra ity hametraka fanontaniana ...
Te hampiasa Wacom Bamboo on Gimp aho ho toy ny tranga voalohany, saingy tsy azoko natao ny mihazakazaka amin'ny Mint 13 Mate. Nitady fampahalalana marobe aho fa tsy dia malalaka loatra amin'ny resaka mandeha amin'ny terminal, handray dingana fohy aho, koa raha misy manana loharano hamaky sy hanandrana hamaha ny olana dia misaotra anao aho.
Pejy iray misy fampahalalana marobe http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=110408
Valiny tamin'i Pepe Mauro
Tsara! Ampiasaiko isan'andro izy io ary miaraka amin'ny GIMP foana, fitaovana 2 azo natambatra tsara izy ireo, na dia heveriko fa tsy adala aza izany lazaiko izany. Indraindray.
Misaotra betsaka noho ity tranonkala mahafinaritra ity!
Manaiky aho, ary ny fampifangaroana mety dia:
Fandaharam-potoana amin'ny bash - fizarana 1
Ny Xfce 4.8 ve no birao misy anao Debian?